Tendrombohitra goavam-be avy amin'ny haavon'ny sary - PetrPikora.com
Krkonoše avy amin'ny haavon'ny sary
PetrPikora.com on Febroary 4, 2018
Ny kisolas Krkonoše dia lava 35 km ary manomboka any andrefana ao Novosvětský mampalahelo (888 m) ary mifarana amin'ny atsinanana amin'ny sedle Kralovecký (516 m). Ny fitsangatsanganana an-tampon'ny tendrombohitra dia marefo ary latsaka any Polonina any avaratra atsinanana. Etsy ankilany, amin'ny faritra atsimo andrefana, dia miara-dàlana lalina any amin'ny lohasaha lalina, izay mihalalina kokoa. Tendrombohitra goavambe no nizarazara ho Tendrombohitra Giant, Giant Mountains ary Highlands Vrchlabí.
Ny Tendrombohitra Giant dia mampiavaka ny Ranomasina Avaratra sy ny Ranomasina Baltika. The Giant Mountains ny renirano Elbe, Malá Labe, Úpa, Jizerka ary Mumlava, ary Kamienica sy Łomniczka. Eo amin'ny faritra Poloney dia misy ny farihy glacier Wielki sy Mały Staw. Any amin'ny faritra Bohemiana amin'ny Krkonoše no misy ny fiakaran'ny hafanana fotsiny ny dobo Mechové.
Any amin'ny faritry ny Tendrombohitra Giant dia misy karazan-javamaniry sy biby. Any amin'ny Tendrombohitra Krkonoše, ireo faritra lehibe indrindra dia miorina eo ambonin'ny fetra ambonin'ny ala ao amin'ny Repoblika Tseky. Eo amin'ny haavon'ny 1200-1300 m mifarana eto ny fehikibon'ny ala. Ambony ny manodidina ny horohorontany, ny miaramila, ny vato ary ny ranomasina. Ity biotope tena mahalana ity dia antsoina hoe tundra arc-alpine. Any amin'ny toerana sasany dia mahita andian-tantely mihitsy aza isika. Ny fitomboan'ny tsimokaretina tany am-boalohany dia voadaroka tamin'ny fiantraikan'ny fandotoana ny rivotra. Ao amin'ny toerana ambany, dia mitombo ny bokikely sy ny bokony. Ny Malacofauna ao amin'ny Tendrombohitra goavam-be dia misy karazana molluscs 90.
2018dji mavicdrônadrônasarysaryMountainskvadroptéraphantomphantom 3phantom 4sarysaryoram-panalaVitkoviceVitkoviceavy any ambonyririnina